किसानहरुले दुधको लागत बढेको गुनासो बारम्बार गरिरहेकाले पनि उनीहरुको हितमा ध्यान राखेर दुधको मूल्य बढाउन बाध्य भएका छौ. गंगा तिमल्सिना महा प्रबन्धक डी.डी.सी. | NEPAL BAJAR
किसानहरुले दुधको लागत बढेको गुनासो बारम्बार गरिरहेकाले पनि उनीहरुको हितमा ध्यान राखेर दुधको मूल्य बढाउन बाध्य भएका छौ. गंगा तिमल्सिना महा प्रबन्धक डी.डी.सी.
दुग्ध विकास संस्थान नेपाल सरकारको स्वाम्त्वि रहेको संस्थान हो । वि सं २०२१ मा स्थापित यस संस्थानले हाल विभिन्न जिल्लाहरुबाट दुध संकलन गरी दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गदर्छ ।हालसालै उत्त संस्थानले आफ्नाउत्पादनको मूल्य वृद्धि गरेको छ । यसै सिलसिलामा उत्त संस्थानका महाप्रबन्धक गंगा तिमिल्सिनासँग नेपाल बजारको एक टोलीले गरेको अन्र्तर्वाता यस प्रकार छ ।
१. किसानलाई राहत दिई उपभोक्तालाई मारमा पार्ने कुरामा तपाई के भन्नुहन्छ ?
डीडीसी पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान हो । डीडीसीमा पनि आफ्नै कारोबारले र कामले चल्ने प्रक्रिया छ । यो संस्था पनि नाफा भन्दा घाटामा नजाओस् । किसानहरुले दुधको लागत बढेको गुनासो बारम्बार गरिरहेकाले पनि उनीहरुको हितमा ध्यान राखेर दुधको मूल्य बढाउन बाध्य भएका छौ । सबै उद्योगहरुलाई लागत बेहोरनु पनि राम्रो होइन । अहिले बढेको मूल्य एक दुई वर्षको लागि नबढनको लागि र्निधारण गरिएको हो । हाल उपभोक्तामा दुधको मूल्य दुई रुपैया बढेको छ र किसानहरुले पाँच रुपैया पाउछन् र व्यवसायीहरुले दुई रुपैया पाउछन् । संस्थानले पूर्व मेची देखि महाकाली सम्मको दुध संकलन गर्छ र आपूर्ति काठमाण्डौमा हुन्छ । हाल पशुलाई दिईने दानाको मूल्य बढेको छ । सबै पशुपालन कृषकहरुलाई उत्साहित गर्नको लागि पनि मूल्य बढाइएको हो । किसानले संकलन गर्ने दुध भन्दा अरु पाउडर दुध राख्दा लागत अझ बढ्छ । त्यसैले आयात गर्ने दुधको पाउडर भन्दा स्थानिय किसानलाई टेवा दिनुपर्छ । उद्योगीहरुले पनि कच्चा पदार्थलाई स्वागत गर्नु पर्छ र कच्चा पदार्थ भनेको नै किसानले संकलन गरेको दुध हो । त्यसैले हामीले किसानहरुलाई महत्व दिनु पर्छ ।
२. डीडीसीले आयोजना थप्ने कुरामा तपाई के भन्नुहन्छ ?
संस्थानले हाल आयोजना थप्ने छैन । बरु दोलखामा रहेको एक सार्वजानिक दुग्ध संस्थानको ५१ प्रतिशत सेयर किन्ने निर्णय भएको छ र अब कार्यन्वयन हुन्छ । दोलखा बजारमा बढी भएको दुध संकलन गरी काठमाण्डौमा ल्याउनको लागि उत्त संस्थानमा लगानी गर्नको लागि संस्थानको निर्णय भएको छ ।
३. दोलखाको दुग्ध संस्थानमा डीडीसीको कति सेयरको मूल्याङनकन रहनेछ ?
जम्मा उक्त संस्थानको मूल्याङनकन २ करोड हो । डीडीसीले ५१ प्रतिशत अर्थात १ करोड रुपैया दिनुपर्छ र हाल ५० लाख रुपैया दिइसकिएको छ ।
४. उक्त संस्थानको मूल्याङ्कन बढी भएको भन्ने बारेमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
उक्त दुग्ध संस्थानको मूल्याङ्कन सही छ । त्यो संस्थानको जग्गा ७ रोपनी जति छ र ठूलो प्लान्ट र कारखाना छ । त्यो संस्थानमा धेरै सहकारीहरुको समेत सेयर छ । हामीले आठ वर्ष अगाडिको निर्धारित मूल्याङ्कन गरेका छौं । यदि अहिले मूल्याङ्कन गरियो भने त १३ करोड जति हुन्छ । त्यसैले बढी मूल्याङ्कन बढी भएको भन्ने कुरा गलत हो ।